Amakhasino E-inthanethi Amukela i-Visa e-Ningizimu Afrika
Ikhaya / Izindlela zokukhokha / amakhasino e-inthanethi amukela i-visa
Amakhasino E-inthanethi Amukela i-Visa
I-Visa ne-MasterCard aziwa ezweni lonke njengezindlela ezimbili ezinokwethenjelwa kakhulu zokwenza izinkokhelo ezitolo naku-inthanethi. Uma kukhulunywa ngokubhenka ekhasino yaseNingizimu Afrika, i-Visa ingenye yezindlela ezaziwa kakhulu zokwenza idiphozithi ngoba inikeza labo abayisebenzisayo ukuthula kwengqondo, ngenxa yesithembiso sayo sejubane nokuphepha. Amakhadi esikweleti e-Visa akuvumela ukuthi wenze imali yangempela futhi udlale ngokushesha nakalula ngezimali ezithunyelwe nge-akhawunti yakho yekhadi lesikweletu kumakhasino ayemukela irandi (i-ZAR) ngemizuzwana nje.
Bathi ukuze wenza imali kufanele usebenzise imali, kodwa uma ukhokha usebenzisa ikhadi lakho le-Visa emakhasino e-inthanethi aseNingizimu Afrika, inani lemali okufanele ulisebenzise ukuthola inzuzo enkulu kakhulu lincane impela. Ngenkathi uzama ukuwina leyo jackpot ekhula njalo (progressive) enkulu, khululeka ukuthi imininingwane yakho iphephile nokuthi ukusebenzisa i-Visa njengendlela yokukhokha manje nasesikhathini esizayo, kungenye yezindlela ezivikeleke kakhulu zokubhenka.
Ngakho-ke qala ukukhokha manje kulawa makhasino ahamba phambili aseNingizimu Afrika ayemukela i-Visa. Uhlu olungezansi lubandakanya amakhasino esiwathandayo avikelekile kakhulu, anokwethenjelwa kanye najabulisayo ayemukela ukudiphozitha nokukhipha imali ngerandi (ZAR) usebenzisa i-Visa.
Amakhasino E-Visa Esiwancoma Kakhulu Abadlali baseNingizimu Afrika:
Indlela yokwenza amadiphozithi e-Visa Emakhasino E-Inthanethi aseNingizimu Afrika
Ukwenza idiphozithi ye-Visa emakhasino e-inthanethi aseNingizimu Afrika kungenye yezinto ezilula nezisheshayo ongazenza. Ukwenza idiphozithi yakho, vakashela ukheshiya bese uchofoza inkinobho yokudiphozitha / yokukhokha. Kuzovela izindlela zokubhenka ongazisebenzisa ukwenza idiphozithi. Khetha i-Visa. Uzokwaziswa ukuthi ufake inombolo yekhadi lakho enezinombolo ezingu-16, usuku lokugcina lekhadi, igama elikukhadi kanye nenombolo ye-CVV, equkethe izinombolo ezintathu zokugcina ezingemuva kwekhadi. Uzodinga futhi ukufaka inani ofuna ukulidiphozitha.
Kuyinto engajwayelekile kulezi zinsuku ukuthi ikhasino icubungule inkokhelo ngokuphazima kwehlo ngemuva kokushaya inkinobho yokuhambisa kanye nokuvikela ukuphepha kwakho, amakhasino amaningi angakucela ukuthi ufake imininingwane yakho ye-Verified by Visa. Le nqubo ifaka elinye izinga lokuphepha ngoba i-Visa ikucela ukuthi ufake imininingwane ethile yokungena bese uphendula umbuzo wokuphepha, ukuzama ukuvimbela ukukhwabanisa kwekhadi lesikweleti ku-inthanethi. Lapho usuhlele imininingwane yakho ye-Verified by Visa, le nqubo izoshesha kakhulu uma uyisebenzisa esikhathini esizayo.
Kungani usebenzisa i-Visa emakhasino?
Uma uhlela ukwenza inkokhelo emakhasino e-inthanethi aseNingizimu Afrika, i-Visa iyindlela yokukwenza. Ukusebenzisa le ndlela yokukhokha kunezinzuzo eziningi, kubandakanya ukushesha kwezinkokhelo. Ngemva kokugcwalisa isicelo sokudiphozitha ekhasino, i-akhawunti yakho yemali yangempela izothunyelwa imali ngemizuzwana, okusho ukuthi ungasuka”ekukhokheni” uye “ekudlaleni” kalula. Enye inzuzo kuwe kanye nekhasino ukuthi ukusebenzisa ikhadi le-Visa njengendlela yakho yokubhenka ekhasino yase-SA kuvumela ikhasino ukuthi iqinisekise imininingwane yakho. Bazokwazi ukuvimbela ukukhwabanisa kwekhadi lesikweleti okudala ukubuyiselwa kokukhokhile, futhi ungaqiniseka ukuthi imininingwane yakho ayisoze yantshontshwa.
Enye yezinzuzo ezinkulu zokusebenzisa i-Visa kunokusebenzisa ama-ewallets ukuthi asikho isidingo sokugcwalisa ifomu lokubhalisa. Njengoba ama-ewallets engamasango okukhokha noma i-ejenti, adinga ukuthi ubhalisele amasevisi abo, kepha ikhadi lakho le-Visa alisebenzi kanjalo. Ukukhokha kuyashesha.
Ukukhipha imali ngekhadi lakho le-Visa
Ukukhipha imali emakhasino e-inthanethi kuludaba olubucayi. Kubadlali abaningi, ubufakazi bekhasino ehamba phambili busendleleni abasisingatha ngaso isicelo sakho sokukhipha imali. Ngokuvamile, amakhasino akhe igama elibi ngoba athatha isikhathi eside ukucubungula ukukhipha imali noma ngabe ukukhipha imali ngokuphelele kungenancazelo. Uma udlala ekhasino ye-inthanethi ye-Visa enhle, njengalawa esiwabhale ngenhla, ungalindela ukuthi ukukhipha imali kubelula nokuthi kusheshe kakhulu.
Imali oykhiphayo ingafakwa ngqo kukhadi lakho lesikweleti le-Visa, kodwa kuzodingeka unikeze ikhasino ikhophi ye-ID, ikhophi yekhadi bese ugcwalisa ifomu ngaphambi kokuthi ifaka imali ku-akhawunti yakho. Kwezinye izimo, ukukhipha imali kuyashesha, kodwa hhayi zonke izikhathi. Kungathatha izinsuku zokusebenza eziyishumi (10)ukuvela.